Soomaali (Somaliska) - Utbildningsguiden
Ku saabsan tahay dugsiyada iswiidhishka.
Iskuullada Sweden waxa loogu tala galay dhamaan caruurta ku nool Sweden. Waa inuu amaan leeyahay isla markaana yahay goob deggen si ay dadkoo dhami mabsuud ugu noqdaan. Qeybtani waxey ka hadleysaa sida ay Sweden u shaqeeyaan dugsiyada xanaanada, kuwa hoose/dhexe iyo dugsiyada sare.
Iskuulka iyo waxbarashada Sweden
Afka hooyo iyo svenska som andraspråk
Dugsi xannaano iyo hawlo kale oo waxbarid
Dugsiga xannaanada waxaa loogu tala galay carruurta u dhexeysa hal sano iyo lix sano. Dugsiga xannaanadu waa in uu ahaadaa mid xiiso leh, aamin ah, carruurta halkaas dhigata oo dhanna waxbarasho fiican u leh. Haddii ay degmadu bixiso waxaa sidoo kale jiri kara hawlo kale oo waxbarid oo loogu tala galay carruurta u dhexeysa hal sano iyo 12 sano.
Hawlo kale oo waxbarid
Fasalka dugsiga xannaanada, waxbarasho dugsi hoose-dhexe iyo guriga xilliga firaaqada
Carruurta badankoodu waxay fasalka dugsiga xannaanada billaabaan marka ay yihiin lix sano jir. Fasalka dugsiga xannaanada ka dib waxaa billaabanaya dugsiga hoose-dhexe ee sagaalka sano soconaaya. Guriga xilliga firaaqadu wuxuu dhameystir u yahay fasalka dugsiga xannaanada iyo waxbarashada dugsiga hoose-dhexe, wuxuu ardayda siinayaa xilli firaaqo oo micne weyn leh inta ay waaliddiintu shaqeynayaan ama waxbaranayaan.
Fasalka dugsiga xannaanada
Waxbarasho dugsi hoose-dhexe
Dugsiga hoose-dhex ee carruurta baahiyaha gaark...
Iskool gaar ah
Dhalinyarada dhameysatay dugsiga hoose/dhexe waxey dooran karaan iney sii wataan waxbarashada dugsiga sare taasoo aan qasab aheyn isla markaana lacag ahaan ah. Dugsiga sare wuxuu ugu horeyn ka kooban yahay barnaamijo qaran iyo barnaamij hordhac ah. Dhalinyarada garaadka dhiman waxey dhigtaan dugsi sare oo gaar ah kaasoo wax lagu barto afar sano.
Dugsiga sare ee gaarka ah
Dugsiyada la seexdo ee waxbarashada dadk waawey...